Ndị na-emepụta ala - ndị na - emepụta ihe na - emepụta ala - China
Ndozi ụlọ elu nkwukọrịta 12m
4-ụkwụ telecom ụlọ elu 4-Legged Angular Tower bụ a na-akwado onwe ụlọ elu e mere na a square isi ụkpụrụ. A na-ahazi ụlọ elu ahụ maka ọkara na ibu dị arọ ma dabara adaba maka saịtị ndị dị na cellular, saịtị MW, ma ọ bụ ụlọ nkwukọrịta etiti. Ngwaahịa anyị na-enye ngwaahịa anyị na-ekpuchi elu ụlọ elu ruo 60m elu telecom elu. Ọ bụ ezie na nhọrọ nke ụdị ụlọ elu telecom karịrị ụlọ elu akara. Ka ihe atụ, monopole ụlọ elu, tubular ígwè ụlọ elu, n'akuku ígwè ụlọ elu, njedebe wdg Anyị nwere ike nke ...
Nnyocha ụlọ elu nkwukọrịta 12m
Ndozi ụlọ elu nkwukọrịta 12m iji hụ na ọrụ nkịtị nke sistemụ nkwukọrịta ikuku na-arụ ọrụ, a na-etinye antenna nkwukọrịta n'otu oge iji mee ka redio dị na redio nke antenna nkwukọrịta iji nweta mmetụta nkwukọrịta achọrọ. N'ime ụlọ obibi ndị mepere emepe, ụlọ ọrụ ọfịs, na ụlọ ọrụ ọfịs iji wuo ụlọ ọrụ nkwukọrịta, a na-ejikarị antennas nkwukọrịta dịkwuo elu antenna, poolu poolu ma ọ bụ a ...
Rooftower 12m Iji hụ na ọrụ nkịtị nke usoro nkwukọrịta ikuku na-arụ ọrụ, a na-etinye antenna nkwukọrịta n'otu oge iji mee ka redio dị na redio nke antenna nkwukọrịta iji nweta mmetụta nkwukọrịta achọrọ. N'ime ụlọ obibi ndị mepere emepe, ụlọ ọrụ ọfịs, na ụlọ ọrụ ọfịs iji wuo ụlọ ọrụ nkwukọrịta, a na-ejikarị antenna nkwukọrịta iji mee ka antenna dị elu, poolu poolu ma ọ bụ ụlọ mpi mpi, ya mere ndanda ...